Wax ka qabashada Cuntooyinka Khasaaray Xiligaan - Xarunta Cilmiga Cilmiga EcoTechnology
Xilliga fasaxa ayaa ku wareegsan geeska, taasna badanaa waxay keentaa caadooyin ku salaysan cuntada. Haddi ay tahay turkiga, latkes, ama kookaha kulul, waxa jira waxoogaa cunto dheeri ah oo ka dhigaysa meelaha qashin qubka wakhtigan. Kacsi 25% ka badan qashinka waxaa soo saara qoysasku laga bilaabo Noofambar ilaa Janaayo.
Talooyin lagu dhimo cuntada qashinka ah ee gurigaaga:
Si taxadar leh u diyaari
Isku day inaad hesho xisaab madax sax ah oo qorshee waxaad u baahan doonto. Hadhaaga waa kuwo qurxoon (wadaaga waa daryeel!), Laakiin waxaa jira suugo karamberriga oo aad u badan oo qaboojiyaha uu hayn karo! Dhammaan Recipes-ka ayaa leh faa'iido Qorsheeyaha Cuntada Xisbiga si uu kaaga caawiyo xisaabintaada.
Lafahaas iyo qolofka khudradda ah waxay sameeyaan kayd qurxoon, markaa ha tuurin! Squash iyo iniinaha bocorka waa kuwo la dubay, waxaadna la yaabi doontaa inta shay ee shaaha laga samayn karo! Fiiri annaga Fikradaha qashinka qashinka Ku dhaji habab badan oo aad ku kordhin karto maaddooyinkaaga.
Ku deeq Wax-ka-beddelka
Haddii aad haysatid cunto dheeri ah, hel xarun ku-deeqidda cuntada maxalliga ah oo aqbali doonta wixii dheeraad ah oo aad haysato. Tani Goobta Badbaadinta Cuntada Ka socota Sustainable America waxay kaa caawin kartaa inaad hesho xarun aqbali doonta waxaad haysato.
Ku dhaji waxaadan isticmaali karin ama aadan ku deeqin. Fiiri annaga talooyin ku saabsan bacriminta guriga.
Talooyin dheeri ah, iska diiwaan geli webinar-kayaga, Guriga Fasaxyada: Iska yaree Raad Kaarboonkaaga Xiligan!
Quudinta Bulshooyinka iyo Ciidda Dalka ku xeeran
CET waxay hormuud u ahayd dhimista cuntada iyo dhaq-dhaqaaqa weecinta ee la lunsaday in ka badan 20 sano, iyada oo hirgelisay qaar ka mid ah barnaamijyadii bacriminta cuntada ee ugu horreeyay ee dalka, waxayna gacan ka geysatay siyaasad dadweyne oo wax ku ool ah. Waxaan aaminsanahay in si wanaagsan loo maareeyo cunnada khasaartay ay muhiim tahay si wax looga qabto isbeddelka cimilada, loo quudiyo dad badan oo gaajeysan, loona kobciyo dhaqaalaheenna. Halkan waxaa ah qaar ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ee dalka oo dhan.
Waxaan ka shaqaynaynaa dalka oo dhan Xalka Cunnada Qashinka ah. Cagaaran mugdiga ahi waxa uu tilmaamayaa Dawladaha Maraykanka oo bilaabay barnaamijyo gaar ah oo ay nagu caawinayaan. Wax badan baro ama nala soo xiriir si aad ula wadaagto!
Jasiiradda Rhode: Taageerada Composting Aquidneck Island
Ciida caafimaadka qaba badaha Rhode Island, barnaamij bacrimin ah oo ay caawiso CET, ujeedadeedu tahay in lagu dhiirigaliyo dabeecad mas'uuliyad deegaan ahaan waarta oo lagama maarmaan u ah horumarinta caafimaadka badda. Compost waxa loo isticmaali karaa wax ka bedelka ciidda ee xakamaynta nabaadguurka gelitaanka xeebaha iyo horumarinta adeegyada nidaamka deegaanka. Iskaashatada kale waxaa ka mid ah Nafaqada Dhulka Madow, Helitaanka Badweynta Nadiif ah, Iyo Warshaddii Nafaqada. Iyada oo taageero laga helayo barnaamijka deeqda Racing ee Saacadda 11-aad, oo ay maalgeliso Schmidt Family Foundation, CET waxay ku siin kartaa xitaa kaalmo cunto oo khasaara badan ganacsiyo badan oo Rhode Island ah si ay si guul leh oo wax ku ool ah u hirgeliso xeeladaha wax looga qabanayo cuntadooda khasaartay.
New Jersey: Qorshaha Maareynta Walxaha Dabiiciga ah ee Waara
Isbahaysiga Cimilada New Jersey waxa uu ku dhawaaqay Qorshe Maaraynta Walxaha Dabiiciga ah (SOMMP) si uu u taageero hirgelinta dhawaan Sharciga Dib u warshadaynta qashinka. Sharcigani waxa uu u baahan yahay soo-saareyaasha qashinka cuntada ee waaweyn oo ka badan 52 tan sannadkii si ay dib ugu warshadeeyaan qashinka cunnada meel la heli karo. Si loo taageero mamnuucidaan, koox-shaqo oo ka kooban 80 daneeyayaal iskaa wax u qabso ah ayaa falanqeeyay farqiga u dhexeeya gobolka ka dibna soo saaray SOMMPfurayaa faylka PDF , naqshadaynta hababka ugu wanaagsan ee ficilka ee ku salaysan caqabadaha iyo fursadaha maxaliga ah. Laga soo bilaabo waxbarashada organics ilaa barnaamijyada samatabbixinta cuntada, guddigu wuxuu bixiyaa 17 Fursadaha Muhiimka ah ee Waxqabadka kuwaas oo hagi doona dariiqa New Jersey ee hore u socodka maaraynta walxaha organic waara.
Minnesota: Kuuggii Sioux
Ururada wadaniga ah, sida Chef-ka SiouxMakhaayada Minnesota oo dhawaan la furay, Owamni, iyo faa'iido-doonkooda, Nidaamyada Cuntada Dhaqanka ee Waqooyiga Ameerika (NATIFS), in lagu horumariyo nidaamyada cuntada waara saxan kasta oo ay u adeegaan, laga bilaabo jikada qashinka yar ilaa maaddooyinka laga keeno gudaha gudaha wax soosaarayaasha asaliga ah. Iyada oo ku saleysan Midwest, waxay ka shaqeeyaan inay wax baraan oo ay kordhiyaan gelitaanka hababka cuntada ee qof kasta oo dhan Jasiiradda Turtle iyo meelo ka baxsan.
Oregon: Siyaasadda qashinka cuntada ee Metro
Golaha Metro Siyaasadda Iska-hortagga Cunnada Ganacsigafurayaa faylka PDF Waxay u baahan tahay matoorada qashinka cuntada ee waaweyn sida dukaamada, makhaayadaha, isbitaallada iyo dugsiyada K-12 si ay u kala soocaan hadhaaga cunnada iyo qashinka qashinka lagu shubo. Haraaga cuntada ayaa ah ku dhawaad ​​18% qashinka la tuuro ee gobolkan, in ka badan kala badhna waxa ay ka yimaadaan ganacsiyo. Iyadoo looga baahan yahay ganacsiyada inay dib u warshadeeyaan qashinka dabiiciga ah, siyaasaddani waxay weecin doontaa qiyaastii 100,000 oo tan oo haraaga cunto ah sannad kasta.
Rhode Island: Sharciga qashinka cuntada ee dugsiga
The Sharciga qashinka cuntada ee dugsiga Rhode Islandfurayaa faylka PDF waxay u baahan doontaa dhammaan dugsiyada gobolka, laga bilaabo Janaayo 1, 2022, inay u hoggaansamaan Mamnuucidda Qashinka Cunnada ee gobolka si loo weeciyo qashinka meelaha qashinka ah loona dhiirrigeliyo ku-deeqidda cuntooyinka aan kharribanayn. Dugsiyadu waxay u baahnaan doonaan inay hanti-dhawrka qashinka ku sameeyaan saddexdii sannadoodba mar Hay'adda Soo-kabashada Kheyraadka ee Rhode Island (RIRRC), taasoo bixin doonta hab-raacyo shakhsiyeed iyo hab lagu dhimo qashinka dugsi kasta. Waxa kale oo ay u baahan tahay dhammaan dugsiyada Rhode Island inay hirgeliyaan oo ay isticmaalaan miisaska wadaaga waxayna dhiirigeliyaan xulashada shirkadaha adeegga cuntada ee dib u warshadeeya qashinka dabiiciga ah oo iibsada ugu yaraan 10% alaabta gudaha.
Colorado: Maalgelinta cusub ee EPA ee lagu taageerayo dadaallada Denver
Waad ku mahadsan tahay maalgelinta ay bixisay Hay'adda Ilaalinta Deegaanka ee Maraykanka, Xarunta EcoTechnology waxay la tacaalaysaa qashinka cuntada ee Denver, Colorado. Waxaan bixinaa xalal cunto oo kala duwan iyadoo loo eegayo baahiyaha ganacsiyada maxalliga ah. Nala soo xiriir si aan wax badan uga ogaano!
New York: HORSE ayaa u yimid Tusten
Magaalada Tusten Dhawaan waxaa lagu rakibay Nidaam Dib-u-warshadeeyn Adag- Adag oo dabiici ah oo leh wax-soo-saarka Koronto (ama HORSE) microdigester oo ku yaal barn-ka magaaladooda, kaas oo ku siin doona goobta tamar laga helo qashinka cuntada iyo agabka organic la midka ah ee meheradaha maxaliga ah. Microdigester-ka, iyo kuwa kale oo kan oo kale ah, waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo qiimaha dheefshiidka anaerobic ee warshadaha. HORSE waxaa lagu quudin doonaa qashinka dabiiciga ah ee maqaayadaha Tusten iyo ganacsiyada kale ee ka heli jiray hagida Xarunta EcoTechnology ee soo kabashada qashinka iyo leexinta.
Connecticut: Hagaha Badbaadinta Cuntada
Xarunta Tignoolajiyada EcoTechnology dhawaan la sii daayay Ku-deeqidda Cunnada Connecticut Waa Sahal.furayaa faylka PDF Dukumeentigu wuxuu bixiyaa agab iyo daraasado kiis si loogu hago kuwa kale si ay u dhisaan barnaamijyo cusub oo samatabbixin cunto ah oo ku yaal goobo ganacsi oo kala duwan, laga bilaabo dugsiyada ilaa dukaamada raashinka. Dukumeentigu wuxuu raacayaa qaabka EPA's ee soo kabashada cuntada ee qaabka kala hormarinta quudinta dadka gaajaysan ka hor hababka kale ee dib u warshadaynta.
WFS_ku-deeqidda_Hagitaanka_Cuntada CT La cusboonaysiiyay 10-11
furayaa faylka PDF